ब्लग मंगलबार, चैत ११, २०७६
प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा जुनसुकै विषय पढ्नेले पनि ‘नेपाल परिचय’ पढ्नुपर्थ्याे। कहिल्यै नछुट्ने साझा सवाल थियो— विश्व मानचित्रमा नेपाल।
कोरोनाभाइरसको प्रकोपले संसारको नक्सा रातै भएको यतिखेर म त्यही वाक्य सम्झिरहेछु । र, देखिरहेछु, रातो थोप्लो मिस्सिएको तर पनि अझैं हरियोपन र हरियो मन बाँकी रहेको नेपाल।
गत मंगलबार (४ चैत) फ्रान्सबाट कतार हुँदै आएकी एक नेपाली युवतीमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएसँगै नेपालले सर्लक्क हरियोको हैसियत चाहिं गुमाएको छ । हरियो देशमा रातो थोप्लो थपिएर खतराको घण्टी जोडले बजेको छ।
कोरोनाले संसारलाई धुरुक्क रुवाएको छ । तर अपवाद केसबाहेक हामी कसरी जोगिएका छौं यतिबेलासम्म ? सरकारले बिरामी नखोजेर ? संक्रमणकारीलाई टेस्ट गर्दै नगरेर ? सानोतिनो रुघाखोकी र ज्वरोलाई घरमै दबाएर ? देशविदेश धेरै आवतजावत नभएर ? प्रश्न धेरै छन् । तर सत्य के हो भने नेपाल आजका दिनसम्म कोरोना संक्रमणबाट बचेकै छ । हरियोमा एकाध अपवाद मात्रै मिसिएको छ।
तर, यो हरियो पात छिनभरमै झरेर देश राताम्य हुनसक्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । कोरोना बाहिरी सम्पर्कबाट आउन सक्छ, घरभित्र आफैँ आउँदैन भन्ने कठोर सत्यलाई बुझ्न र पालना गर्न सक्नुपर्छ। कोरोना फैलिएको प्रमाण भेटिइनसकेकाले पनि हामीले आफ्नो जीवनलाई बेलैमा घरभित्र सीमित बनाउन सके हाम्रा जीवनका हरिया पातहरु बुरुरु झर्ने छैनन् । हाम्रो देश पतझरको देश बन्ने छैन । सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन) घोषणा गरिसकेको छ । फुत्तफुत्त घरबाहिर निस्केर बहादुरी देखाउने बेला हैन हो।
हामीले चार वर्षअघि भुइँचालोको कठोर पीडा व्यहोर्‍यौं । त्यो पीडाबाट लगभग तंग्रिसकेका छौं । सानाठूला, जे जस्ता भएपनि हिजोभन्दा बलिया घर बनिसकेका छन्।
भुइँचालो पनि बाजा बजाएर आएको थिएन । एकैचोटि आयो र हामीलाई घरबाट बारीको डिलमा पुर्‍यायो । घरमात्र हैन, भरसमेत भत्केको दृश्यको लाचार साक्षी बन्दै हामी बारीको डिलमा पाल हालेर, बोरा ओछ्याएर बस्यौं। विस्तारै धूलो टक्टकायौं, धर्मराउँदै उठ्यौं।
भूकम्पपछिको पहिलो रात भात पाकेन । तर भोलिपल्ट उज्यालो भएपछि अचम्म भयो । घरघरबाट ग्याँस, चामल, दाउरा, नून, तेल, तरकारी जे जे छ निकाल्यौ । पालमुनि मिलेर पकायौं, खायौं । दोस्रो छाकमै अधिकांशको पेटमा तातो दाल र भात पर्‍यो ।
बेलैमा तातो खान पाएर सातो गएको हाम्रो अनुहारमा विस्तारै कान्ति फिजियो । भूकम्पपछि बेलैमा सरसफाइ र तातोतातो खानपिनमा हाम्रो स्वतस्फूर्त ध्यान पुग्यो । रोगहरु फैलन पाएनन् । घाउले मल्हम पायो । घर विस्तारै उठे । हामीलाई संसारले भर दियो । सरकारले साथ दियो । सञ्चारमाध्यम असाध्यै परिपक्व बने ।
केही कमीकमजोरी भएपनि पालबाट हामी उठ्यौं । हामीले पुर्खाबाट पाएको निर्माण संस्कृति त जोगिएन । घरहरु पनि फराकिलो र सहज जीवनयापन गर्न लायक बनेनन् । काम फटाफट भएनन् । पुनर्निर्माण अल्झिरह्यो, अझैं पनि थोरबहुत अल्झिरहेकै छौं । तर तत्कालको उद्धार, उपचार, राहत र उपकार त लोभलाग्दो थियो।
भूकम्पले हामीलाई घरबाहिर धकेलेकोे थियो । कोरोनाले यतिबेला घरभित्र घचेटेको छ । यतिबेला हाम्रो भर भन्नु नै घरभित्रको जीवन भएको छ । संसारभर फैलिएको यो कहरका बेला नेपाल त सिंगो पृथ्वीको डिलजस्तो भएको छ।
यो डिल जोगाउने एउटै उपाय छ, आफैंले आफैलाई थुन्ने । आफूलाई थुन्ने, आकाशलाई थुन्ने, जमिनको यातायातलाई थुन्ने । अब हामीले स्वअनुशासनमा आफूलाई बाँध्ने नागरिकको कर्तव्य पूरा गर्नुछ।
हर घर क्वारेन्टाइन नै कोरोनाको कहर कम गर्ने सहज उपाय हो । यो पाठ चीनले संसारलाई सिकाइसकेको छ । कोरोनालाई एकहिसाबले कोरा सम्झेर बारौं । भाँजो नहालौं । ‘आकाशैं बाँधु, पातालै बाँधु, घरै बाँधु’ भन्दै आधारातमा ‘फेरि’ लगाएको सम्झौं र बाधौं । तन र मनलाई घरभित्र बाँध्दा धेरथोर तनाव होला । योग र ध्यानले सहज बनाउन सक्छ।
कोरोनाको कहर कति लम्बिन्छ थाहा नभएकाले, खानेकुरा फारो गरौं । मिठो जिब्रोलाई बाधौं । एक पटकमा दाल या तरकारीमात्र पकाऔं । घर वा डेरामा भएका थोत्रा कार्टुन र गमलामा अब तरकारी रोपौं ।
हामी पृथ्वीको डिलैमा उभिएका छौं । डिल फराकिलो छैन । त्यति बलियो पनि छैन । दायाँबायाँ दलदले हिलो भइसकेको छ। डिल नजोगिए हामी जोगिन ढिलो हुन्छ । त्यसैले मनको बाँधलाई बाँधेर स्वतस्फूर्त कर्फ्यू लगाऔं।